IManjaro Linux 19.0 "Kyria" ifika neLinux 5.4, Xfce 4.14, KDE 5.17, Gnome 3.34 nokuningi | Kusuka kuLinux
Kumenyezelwe ukukhishwa kwenguqulo entsha yokuvuselela iManjaro Linux 19.0 igama elibhalwe ngegama elithi “Kyria. Kule nguqulo entsha Kwethulwa kugcinwa iLinux Kernel 5.4 LTS, inguqulo entsha ye I-Pacman 9.3 kanye nokuvuselelwa kwezindawo ezihlukile zedeskithophu okusingathwa ukusingathwa.
Kulabo abangajwayele iManjaro Linux, kufanele wazi ukuthi lokhu kungukusabalalisa lokho kusekelwe ku-Arch Linux, kodwa inesethi yayo yokugcina. Ukusatshalaliswa kuhlose ukusebenziseka kalula ukugcina izici ze-Archnjengomphathi wephakeji lePacman nokuxhaswa kwe-AUR.
Ukusatshalaliswa kugqama ngokuba khona kwenqubo yokufaka eyenziwe lula futhi esetshenziswa kalula, ukusekelwa kokutholwa okuzenzakalelayo kwemishini nokufakwa kwabashayeli okudingekayo ukuze isebenze.
IManjaro Linux ukusatshalaliswa kwe-GNU / Linux enethuba lokukhetha ukuthi iyiphi i-interface yomsebenzisi ngokuzenzakalela Izolandwa futhi ifakwe, ngokusemthethweni ine-XFCE, KDE, Gnome, Cinnamon nezinye eziningi ezifakwe ngumphakathi.
Ngokuyisisekelo uhlelo lokusebenzela lwamahhala lwamakhompyutha wakho siqu futhi lugxile ekusebenziseni kalula. Njengoba iManjaro isuselwa ku-Arch Linux, lolu hlelo lusebenzisa imodeli yentuthuko ebizwa ngeRolling Release.
1 Yini okusha kuManjaro Linux 19.0 “Kyria”?
2 Landa iManjaro Linux 19.0 "Kyria"
Yini okusha kuManjaro Linux 19.0 “Kyria”?
Ngokukhishwa kwale nguqulo entsha buyekeza uhlelo, kuhloswe ngalo ukusiza umsebenzisi ukuthi agweme ukulanda i-GB eyengeziwe yezibuyekezo zephakeji futhi anikeze kangcono isithombe ngamaphakeji azinzile amanje, kuze kube umzuzu wesizukulwane sabo.
Ngisho naleyo yamaphakeji asalondoloziwe kusuka enguqulweni yangaphambilini yiLinux Kernel 5.4 LTS Izothola izibuyekezo kuze kube ngu-2022. Njengoba inguhlobo olude lokusekelwa, iyaqhubeka nokuthola izibuyekezo futhi kungcono ukugcina inguqulo ye-LTS.
Ngenkathi uPacman 9.3 ethola izibuyekezo ezithile, Abathuthukisi beManjaro bathi:
Nge-backend ethe xaxa yokuthengiselana ethembeke kakhulu, inqubo yethu yokuthuthukisa kufanele ibushelelezi manje. Siphinde sathuthukisa izinga lephakeji ngokufaneleka kwe-GTK-UI yethu. Ukwenza ngcono ukuphathwa kwethu kwephakeji, sinike amandla ukuxhaswa kwe-snap ne-flatpak ngokuzenzakalela.
Mayelana nokuvuselelwa esingakuthola kwiManjaro Linux 19.0, yilawo izindawo zedeskithophu bethulwe ngezinhlobo zabo:
I-Xfce 4.14 futhi lokho kuyaqhubeka kube ukunambitheka okuhamba phambili kokusatshalaliswa. Kule nguqulo entsha kwethulwa ingqikithi entsha kaMatcha, kanye ne isici esisha se- "Screen Profiles" evumela abasebenzisi ukuthi bagcine futhi bagcine amaphrofayli wokubonisa futhi basebenzise ngokuzenzakalela lawa maphrofayili lapho izibonisi zixhunyiwe.
Ohlangothini lwe-GNOME, singathola IGNOME 3.34 ngesithombe sangemuva sikaManjaro esinamandla, ithuluzi elisha le-Gnome-Layout nokuheha ukusebenzisa le flavour yi- Ukuhlanganiswa kweFeral Interplay Gameplay ngemidlalo engcono netimu yokungena ngemvume entsha.
Enye indawo, I-KDE Plasma 5.17 lokho kufika ngokubukeka okusha ngokuphelele, Izicelo ze-KDE 19.2.2, Izinhlaka ze-KDE 5.66.0 kanye nesethi ephelele yezingqikithi ze-Breath2 kufaka phakathi izinhlobo ezikhanyayo nezimnyama, isikrini se-animated splash, amaphrofayili we-Konsole, izikhumba ze-Yakuake, nemininingwane eminingi eminingi.
Enye into entsha equkethe iManjaro Linux 19.0 ukusekelwa okusha okufakwa ngokuzenzakalela kwamaphakeji we-snap ne-flatpak engafakwa nge-interface entsha yokuphathwa kohlelo lokusebenza Bauh.
Lesi isikhombimsebenzisi sokuqhafaza sokuphatha izinhlelo zokusebenza ze-Linux namaphakeji. Iyakwazi ukuphatha i-AUR, AppImage, Flatpak, Snap, kanye nezinhlelo zokusebenza zewebhu zomdabu. Futhi kuyithuluzi elihle kakhulu lokufaka i-Octopi esikhundleni.
Landa iManjaro Linux 19.0 "Kyria"
Okokugcina kulabo abanesifiso sokukwazi ukuthola inguqulo entsha yeManjaro, bangathola isithombe sesistimu ngokuya kuwebhusayithi esemthethweni wokusatshalaliswa kanye nasengxenyeni yalo yokulanda ungathola izixhumanisi zokulanda noma yikuphi ukunambitheka okuthandayo noma izinguqulo zomphakathi ezengeza ezinye izindawo zedeskithophu noma abaphathi bamawindi.
Indlela ephelele ye-athikili: Kusuka kuLinux » Ukusatshalaliswa » IManjaro Linux 19.0 "Kyria" ifika neLinux 5.4, Xfce 4.14, KDE 5.17, Gnome 3.34 nokuningi